संकटमोचन हनुमानले सबैको संकट हरण गरुन, २९ पुष/जनवरी १३ को राशिफल « Pana Khabar
संकटमोचन हनुमानले सबैको संकट हरण गरुन, २९ पुष/जनवरी १३ को राशिफल
आज श्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल पौष २९ गते शनिबार इश्वी सन २०१८ जनवरी १३ तारीख माघकृष्ण पक्ष द्वादशी तिथी चन्द्रमा बृश्चिक राशिमा सुर्य दक्षीणायन हेमन्त ऋतु – ज्यो . पं . सरोज घिमिरे
खानपानको क्षेत्रमा बिषेश सजग रहनुहोला । बाणीका कारण सामान्य बादबिवादको सामना गर्नु पर्नेछ । मित्रजनहरुको साथ सहयोग द्वारा आर्यआर्जका क्षेत्रमा भने उत्तम समय रहेकोछ । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा भने समय मध्यम रहेकोछ ।
ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्रमा सामान्य घाटा ब्यर्हाेनु पर्ने सम्भाबना रहोकोछ । प्रेम सम्बधमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामान्य कार्य सम्पादनका निम्ती अधिक श्रम खर्चनु पर्नेछ । सभासम्मेलनमा जन्य कार्यमा आत्मसम्मानमा ठेस पुग्न सक्नेछ ।
तपाई द्वारा सम्पादितकार्यमा खोट देखाउने हरुको बृद्धि हुनेछ । प्रतिस्पर्दा जन्य कार्यका क्षेत्रमा सजग रहनु होला । तात्कालिक यात्राको योग आईपर्न सक्नेछ । शारिरीक आलस्यताले कार्य सम्पादनमा समेत प्रभाब पार्न सक्ने सम्भाबना रहेकोछ ।
बौधिक ब्यत्तित्व हरुको सामु आफु कमजोर भएको महसुस हुनेछ । नयाँ कार्य सुचारु द्वारा बिभिन्न आम्दानिका श्रोतहरु जुट्नेछ । गैर बिश्वसनिय ब्यत्तिहरुको पछि लाग्नाले सामान्य झन्झट प्राप्त हुन सक्नेछ ।
सभा सम्मेलनमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । पारीवारिक मेल मीलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमता मा बृद्धि हुने योग रहेको छ ।
आटँ शाहसको कमीका कारण सामान्य कार्यको निम्ती अधिक समय ब्यतित हुनाले मानसीक तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । नजिकका मित्रजनहरु बिचको सम्बन्ध टाढिन सक्ला । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुन सक्छ ।
अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ । बाणीको चातुर्यताले नयाँ मित्र प्राप्त हुन सक्छन् । सामान्य चोटपटकको सम्भाबना रहेको छ । मान्यजन संगको सम्बन्ध खराब रहन सक्छ । शुभचिन्तकहरुको साथ प्राप्त हुनाले कार्य सहज बन्नेछ ।
पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । पारीवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । प्रतिस्पर्दा मुलक कार्यमा बिषेश सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ ।
नेतृत्व गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । मनमा चन्चलताले बास गरेतापनि ब्यापार ब्यवसाय बाट राम्रो लाभ लिन सकिनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्नाले दिगो आर्थिक लाभको बाटो बन्न सक्नेछ ।
नरिवल खसाल्ने जात्रा शुक्रबार, नाग–नागिनीको मिलन १२ वर्षमा
बाहिरी चक्रपथ बन्ने बाटो खुल्यो : जग्गा एकीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्को अनुमति
आमाको मुख हेर्ने दिनः पवित्र स्थल मातातीर्थ कुण्डमा भक्तजनको भीड